ကျောင်းသားဗီဇာသက်တမ်း (၃)နှစ်တို:မြှင့်ပေ:ကြောင်း EMGS အဖွဲ့အစည်းမှထုတ်ပြန်
မလေးရှားနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိEducation Malaysia Global Services (EMGS)အဖွဲ့အစည်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားမည့် မြန်မာကျောင်းသား/သူများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကျောင်းသား/သူများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် EMGS Feesကိုပြောင်းလဲတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၊ တိုးမြှင့်လိုက်သောငွေပမာဏမှာယခင် EMGS Fee RM 2700 မှ ယခုRM 3500သို့တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၊ EMGS Fees တွင် New application Processing Fee , Medical Screening Fee, Student Pass Fee , Multiple Entry Visa Fee , Insurance , IKad Feeစသည်တို့ပါဝင်ကြောင်း ၊ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သောကျောင်းသားVisaသက်တမ်းမှာ - ( ၃) နှစ်တာဖြစ်ပြီး၎င်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချက်ကို ဧပြီလ( ၇) ရက်နေ့တွင် နေ့တွင်စတငအတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရကြောင်း
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု “Professional Interior Design” ဘာသာရပ်ကိုMSI တွင်ပညာသင်ဆုဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်
“Rresidential design, commercial design, hospitality design, healthcare design, universal design, exhibition design, and spatial branding.”စသည့် Interior designအမျိုးအစားပေါင်းများစွာလေ့လာနိုင်မည့် ထိုဘာသာရပ်အတွက်Diploma သင်တန်းကာလမှာ - (၂ နှစ်နှင့် ၆ လ) ကြာမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီးကျောင်းဖွင့်ချိန်များမှာ - ဇန်န၀ါရီလ ၊ မတ်လ ၊ မေလ ၊ သြဂုတ်လတုိ့ဖြစ်သည်။KDU Penang University College မှ Diploma သင်တန်းပြီးဆုံးပါကအလုပ်အက်ိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် (Interior Designer, Furniture Designer , Landscape Planner, Stage Designer, Production Set Designer , Exhibition Designer , Architectural Assistant , Render Artist ) စသည်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Civil Engineering ဘာသာရပ်အတွက် ကျောင်းလခ၏( 50 % ) ကင်းလွတ်ခွင့် ပညာသင်ဆုကိုMSI တွင်လျှောက်ထားနိုင်
ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားမည့်သူများအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ - (၁၀)တန်းအောင်မြင်ထားပြီးသူများအတွက် (၁၀)တန်းအောင် အမှတ်စာရင်း ၊ အောင်လက်မှတ် ၊ HND (Civil) တက်ရောက်ဆဲ ၊ တက်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အမှတ်စာရင်း ၊ Certificate များ ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်နေသော Engineering ကျောင်းသားများအတွက် အမှတ်စာရင်းများသည် ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ- IELTS ( 6.0) ၊ TOEFL (550) ရှိရမည်။ ၄င်းသတ်မှတ်ချက်များ မရှိပါက MSI ရုံးခန်းတွင် Segiတက္ကသိုလ်မှစစ်ဆေးသောအဂ်လိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်သည်။ International School တွင်တက်ရောက်နေသောကျောင်းသားများအတွက် IGCSE / GCE ( O) Level / GCE ( A) Level အမှတ်စာရင်းးနှင့် အောင်လက်မှတ်များလိုအပ်သည်။အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တွင် အမှတ်ကောင်းပါက IELTS / TOEFL ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
MSI နှင့် PSB Academy တို့ပူးပေါင်းပြီးစင်္ကာပူနိုင်ငံပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆွေးနွေးပွဲ
Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တို့ပူးပေါင်း၍ “Dr. KohYit Yan PhD (Engineering), University of Leeds ၊ BEng (Hons) in Mechanical Engineering, University of Leeds” မှ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ၊နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပညာသင်ထောက်ပံကြေးများအကြောင်းကိုရန်ကုန် ၊ မန္တလေးမြို့များတွင် (၂) ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပသွားမည်။“ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ် ပင်းယခန်းမတွင် (၂၀၁၆) ခုနှစ် မတ်လ (၁၉)ရက် စနေနေ့ ၊နေ့လည် (၁) နာရီမှ မွန်းလွဲ (၃) နာရီအထိလည်းကောင်း ၊မန္တလေးမြို့ ဟိုတယ်မန္တလေးစံပါယ်ဖြူခန်းမတွင်မတ်လ (၂၀)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် (၁) နာရီမှ မွန်းလွဲ (၄)အထိကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှု၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါ်စုစုလှိုင်ထံမှသိရသည်။
“KDU Penang Univesity College ၏ “The Most Outstanding Agent Awards 2015”ဆုကို MSI မှချီးမြှင့်ခံရ
MSI ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် KDU University College တို့သည် 2014 နှစ်မှ စတင်ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထူးချွန်ကျောင်းသား/သူများအတွက် အထူးပညာသင်ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းသား /သူများအတွေး အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် MSI တို့ ပူးပေါင်းပြီး “Scholarship” ပညာသင်ဆုပေးအပ် ချီးမြှင့်သည့် ပညာရေးပြပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးမှန်ကန်ထိရောက်စွာပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ MSI သည် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် မှန်ကန်တိကျသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် မိမိစိတ်ကြိုက်သင့်တော်သည့် လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသား/သူများသွားရောက်လေ့လာသင်ကြားရမည့် တက္ကသိုလ်များ ၊ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုများ အတွက်တိကျမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းစသည့် အရည်အသွေးကောင်းများကြောင့် 2015 ခုနှစ်၊ KDU Penang University College ၏ “The Most Outstanding Agent Award” ဆုကို MSI ကုမ္ပဏီအားပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းကို KDU Penang University College ၏ International office / Business Development Manager “Mr. Gerard Boey Kong Hoong“ မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“W.H.Oအသိအမှတ်ပြုဆေးဝါးဖော်စပ်သည့် Pharmacyဘာသာရပ်ကိုMSIတွင် လျှောက်ထားပေးနေပါသည်”
မြန်မာနိုင်ငံမှ သိပ္ပံဘာသာကိုအခြေခံသောဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုခုရရှိထားပြီးသူများ ၊ GCE ‘A’ level ၊ Diploma in Science အောင်မြင်ပြီးထားသူများသည်မလေးရှားနိုင်ငံAimst University ၏ Bachelor of Pharmacy (Hons)တန်းအတွက်MSI တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ (၁၀)တန်း ၊ GCE ‘O’ level အောင်မြင်ထားပြီးသူများအနေဖြင့် Aimist University မှ Foundation in Scienceကိုတစ်နှစ်ကြာဦးစွာသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ - IELTS (5.5) ရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ Foundation တန်းအတွက် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ- ( မတ်လ ၊ မေလ ၊ ဇူလိုင်လ ) တို့ဖြစ်ပြီးဘွဲ့ဒီဂရီတန်းအတွက် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာတစ်နှစ်လုံးတွင် (စက်တင်ဘာလ) တစ်ကြိမ်သာဖြစ်သည်။ ၄င်းဘာသာရပ်အတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲများ ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရခြင်းများ၊( Project work) အတွက် “Reports (or) Presentations”လုပ်ဆောင်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရပြီးတတိယနှစ် (Industrial Training )ကိုပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ၊ဆေးခန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာဒေသများတွင် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးနှစ်တွင် (Hospital Trianing) ဆေးကုသမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၊ ဆေးဝါးဖော်စပ်ခြင်းတို့ကိုအဓိကလက်တွေ့လုပ်ဆောင်သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Webster တက္ကသိုလ်၏ Master တန်း(MBA, MA)အတွက် (၄၅%)အထူးပညာသင်ဆု
(၂၀၀၄) ခုနစ်မှစ Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာကျောင်းသား/သူများအတွက်အထူးပညာသင် ဆုများပေး အပ်လျက်ရှိရာ(၂၀၁၆) ခုနစ် မတ်လကျောင်းဖွင့်ချိန် Webster တက္ကသိုလ်၏ မာစတာတန်းကိုတက်ရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်ကျောင်းသား/သူများအတွက် ပညာသင်ဆုများကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊၄င်းပညာသင်ဆုများကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတက္ကသိုလ်များမှ မည်သည့်ဘွဲ့ဒီဂရီမဆိုရရှိထားပြီးသူများ ၊ နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိထားသူများလျှောက်ထားနိုင်ပြီးပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်သောငွေပမာဏရာခိုင်နှုန်းမှာကျောင်းလခ၏ (၄၅%)ကိုကင်းလွတ်လျော့ချပေးမည့် ပညာသင်ဆုဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းပညာသင်ဆုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ၏တိုက်ရိုက် ကျောင်းခွဲဖြစ်သောထိုင်းအခြေစိုက် Webster တက္ကသိုလ်၏မြန်မာနိုင်ငံရှိတစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သောMSI ရုံးခန်းအမှတ် (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ် (ညာ)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်) ၊ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၌် သက်ဆိုင်ရာပညာရေးစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများဖြင့်ဇန်န၀ါရီလ(၃၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကိုMyanmar Search International (MSI) ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါ်စုစုလှိုင်ထံမှ သိရှိရသည်။
Engineer ဘွဲ့ရကျောင်းသားများပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးစင်္ကာပူဒေါ်လာ (2500) ကို MSIျွှင်လျှောက်ထားနိုင်
Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ MDIS တက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်း၍ Engineering ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက် Master Program ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ(2500) ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် ပညာသင်ဆုများအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကို(၂၀၁၆) ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၄) ရက် ၊ MSI Office တွင်နေ့လယ် (၂) နာရီမှ ညနေ(၄) အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှသိရသည်။
Webster University မှ “The Most Outstanding Agent “2014-2015 ဆုကို MSI မှချီးမြှင့်ခြင်းခံရ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိထူးချွှန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်ဆုအများဆုံးလျှောက်ထားပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းမတက်ခင် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ခြင်း ၊ ကျောင်းတက်ပြီးသော်လည်းထပ်မံလိုအပ်သည့်အရာများကိုစိတ်ကျေနပ်သည်အထိ ၀န်ဆောင်မှုဆက်လက်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်းဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း
Myanmar Search International မှ ဦးစီးကျင်းပသည့် ၂၀၁၆ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကြီး
ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်သူများမှာ- ဆယ်တန်းအောင် ,IGCSE , GCE O Level ၊ A Level , ဘွဲ့ရပြီးသူများတို့ဖြစ်င်္ပြီး ၄င်းပွဲနေ့တွင်ပြည့်စုံသောပညာရေးအထောက်အထားဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများတစ်ပါတည်းယူဆောင်လာပါကတိုက်ရိုက်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်စုံစမ်းဆွေးနွေးလိုပါက Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေး ၀န်ဆောင်မှု ရုံးခန်းအမှတ် (234) ဒုတိယထပ် (ညာ) ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်) ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။